"Neymar Waligii Ma Noqon Doono Xiddiga Adduunka Sababtoo Ah... Mana Aha In Barcelona Ay Lasoo Saxeexato" - Halyey Reer Brazil Ah Oo Ka Nixiyey Laacibka PSG - Gool24.Net
“Neymar Waligii Ma Noqon Doono Xiddiga Adduunka Sababtoo Ah… Mana Aha In Barcelona Ay Lasoo Saxeexato” – Halyey Reer Brazil Ah Oo Ka Nixiyey Laacibka PSG
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr waligii kuma guuleysan doono abaal-marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or ama FIFA The Best, sababtoo ah, waxa uu qaatay go’aan aad ugu xumaa noloshiisa iyo heerkii sare ee uu hiigsanayay, kaas oo ka hor istaagay inuu raaci karo heerka laacibiinta Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Halyeygii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Bayern Munich ee Giovane Elber ayaa waxa uu rumaysan yahay in go’aankii uu Neymar ugu wareegay PSG uu ahaa mid xun oo ka hor joogsanaya inuu noqdo xiddig adduun, waxaanu kula taliyey Barcelona in aanay dib ula soo saxeexanin.
Neymar oo ay da’diisu tahay 28 jir ayaa lala xidhiidhinayaa inuu dib ugu soo laabanayo Barcelona saddex sannadood kaddib markii uu ka doortay PSG oo hor dhigtay lacag badan xilli aanay kooxda reer Spain diyaar u ahayn inay sii dayso, waxaanu uga baxay Camp Nou lacag dhan €222 milyan oo Euro.
Elber oo waraysi siinayay idaacadda Spanish-ka ah ee Cadena SER ayaa waxa uu u sheegay Barcelona in aanay isku mashquulinin inay dib usoo celiyaan Neymar ee ay raadsadaan ciyaartooyo kale, waxaanu yidhi: “Maya. Sida uu uga tegay Barcelona, aniga ahaan, ma jirto suurtogalnimo uu ugu laabanayo Barcelona.
“Neymar si xun ayuu ula dhaqmay Barcelona, sababtoo ah, markii uu ka tegayay Barcelona waxa uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo xiddiga ugu wanaagsan adduunka. Taasi Ilaahay ayay u taallaa, mana noqonaysid xiddiga adduunka inta aad u ciyaarayso PSG. Waxay ahayd inaad tagto Real Madrid ama Barcelona, koox aad kula guuleysan karayso Champions League.
“Waxaan rumaysanahay in PSG aanay wali awoodi karaynin inay ku guuleysato Champions League saddexda ama afarta sannadood ee soo socota.”
Neymar waxa uu PSG kula guuleystay saddex horyaal saddexdii sannadood ee uu joogay, laakiin waxay dhibaato ka haysataa dhinaca Champions League oo ay marba kaga hadhayaan meel aanay cidina ku qanci karin marka loo eego maalgelinta lagu sameeyey kooxda.